Maareynta Tayada - Pandawill Technology Co., Ltd.
Xakamaynta Tayada soo socota
Waxaan u adeegsannaa calaamadda caanka ah ee alaabta ceeriin ah waxaanan ka dhignaa heerka kormeerka sida ku cad Heerka Caalamiga ah iyo shuruudaha macaamiisha. Waxaan la soconeynaa alaab-qeybiyeyaasha waxqabadyo horumarineed oo isdaba-joog ah waxaanna dhiseynaa iskaashi muddo-dheer ah dhammaan alaab-qeybiyeyaasha.
Xakamaynta Tayada Hawsha
Wax soo saarka wanaagsan wuxuu ka yimaadaa waxsoosaar wanaagsan laakiin ma ahan kormeer. Waxaan haynaa habka wax soosaarka caadiga ah iyo tilmaamaha shaqada oo faahfaahsan saldhig kasta oo hawlgal oo ku jira khadka wax soo saarka si loo hubiyo in heerka hawlgalka loo saxay si sax ah.
Xakamaynta Tayada Ugu Dambeysa
Waxaan kormeernaa oo aan si adag u xakameynaa tayada alaabooyinka baxa si waafaqsan heerarka caalamiga ah iyo heerarka macaamiisha, waxaan la soconaa tayada wax soo saarka alaabada kadib iibka waxaanna qaadnaa talaabooyin horumarineed oo deg deg ah oo wax ku ool ah marka ay jiraan wax jawaab celin tayo aan caadi aheyn.